Hunhu uye kuchengetedza kweSpanish Alano | Imbwa dzepasi rose
Hunhu uye kutarisirwa kweSpanish Alano
Monica Sanchez | | General Imbwa, Imbwa dzinobereka
El Spanish Alano imbwa, inoratidzirwa nekugona kwayo kuita mabasa nemombe, kuvhima, mukurwa nenzombe, muhondo uye sedziviriro nedziviriro, kunyangwe nhasi kushandiswa kwayo kwadzikira kusvika basa remumunda nemombe nekuvhima.
Kana zviri zvehunhu hwako, ndezve imbwa ine hunhu hwakakomba izvo zvinowanzo kuve zvakakurisa zvisinei nemuridzi wayo nevanozivana navo. Zvakare inozviisa pasi, inoteerera uye ine rudo uye nevana, anowanzo kuve ane hushamwari uye anoshivirira; zvakadaro nevanhu vasingazivikanwe maitiro ake pane kusavimba uye kunyangwe isiri imbwa ine hukasha, haizeze kurwisa pamberi pechiratidzo chekutyisidzira kana pakurayirwa nemuridzi wayo.
1 Hunhu hweSpanish Alano
2 Kuchengeta iyo Spanish Alano
4 Spanish Alano vana
6 Mutengo weSpanish alano
Hunhu hweSpanish Alano
El kushamwaridzana nedzimwe imbwa Izvo zvakakosha kune irudzi urwu sezvo kukwizwa navo kuchaita kuti ive nehukama neidzo dzimwe imbwa.
Kune rimwe divi, iyi imbwa inoda muridzi ari pamusoro uye anokunda hunhu hwakasimba uye hune chivimbo, ndiani nzwisisa sei hunhu hweaAlans aya uye utore kuti vatevere kuraira kwako uye vateerere sezvazviri mujaho uyu, uchibvumira hukama hwakakwana pakati pevaviri.
Simba reshaya yaro chimwe chimiro chinosiyanisa rudzi.
Imbwa yeAlano hazvisi nyore kudzidzisa, pese pazvinoshuvira kuva nemumwe pamba, zvakakosha kuti tinzwisise kuti mhuri yese inofanirwa kutora chinzvimbo chepamusoro pamberi pake, kuti nzvimbo yake iri kunze kwemba, panofanirwa kuve nenhengo yemhuri inozvifunga musoro wepakeji, muite kuti ateerere mirairo uye ateerere.
EL Chikamu chekukura cherudzi urwu, inosvika mushure memakore maviri nehafu.
Iyo inogona ye saizi hombe uye yakasimba kwazvo, yakashandurwa kufamba madaro marefu mumaminetsi mashoma nekuda kwehukuru hwemakumbo ayo, makumbo epamberi ari akasimba, kazhinji ganda rayo retsandanyama rinofambisa basa rayo rekuvhima uye nezvipfuyo, nepo kana chiri chipfuwo panokosha chiitiko cheDaily. kwaari.
Kana ari ruvara rwehuto hwavoKune brindle, dema, tsvuku, yero, mhumhi grey, iine mavara machena mune dzimwe nzvimbo chaidzo, kunyangwe nzvimbo idzi dzisipo muAlans dzese. Ivo chaizvo matambudziko mashoma ehutano iyo inotambudza iyo Spanish Alano, yakapihwa kurera kwake kune rustic basa, muchokwadi, zvinonzi ane kugona kugona kupora kana paine mamiriro ehutano.
Izvo zvinopesana nekuchinja kwetembiricha saka harisi dambudziko kuti vavate kunze kwemusha.
Nekuda kwehunhu hwepanyama hwerudzi urwu, zvinokurudzirwa kuti avo vanazvo semhuka dzinovaraidza vazvipe dzinenge nhatu kufamba kwezuva nezuva uye nekupa nzvimbo dzakashama dzavanogona kumhanya nekutamba.
Kuchengeta iyo Spanish Alano
Kana chishuwo chedu chiri chekutenga Spanish Alano puppy, zvakakosha kuti tiongorore kwakatangira, kana iine chizvarwa, kana chakanyoreswa muLOE, kuti rekodhi yekudzivirira yave kusvika pari zvino kana kuti atova nemwedzi inodarika miviri aberekwa, nekuti hazvikurudzirwe kuti umuparadzanise pamberi paamai vake.
Kana tangova mudzimba medu, tinofanirwa kuona kuchengetedzwa kushoma.
Bhura jasi rake kamwe chete pasvondo.
Chengeta yako maziso, nzeve nemeno, iyo yaunofanirwa kuchenesa nguva nenguva.
Vagezese nguva zhinji pazvinenge zvakakodzera.
Chengeta up-to-date majekiseni avo uye deworming, nerubatsiro rwekuratidzwa kwezvipfuyo.
Rudzi urwu rwembwa rwakanyanya yakasimba uye yakakura, yakanakira nzvimbo hombe uye dzakavhurika, iyo hunhu hwayo inoita kuti igadzirire kugamuchira nekuterera mirairo pasina dambudziko, sekureba sekuona kwayo tenzi wake semusoro wepakeji, kuramba kwayo kurwiswa kwemamiriro ekunze uye nzira iyo kwayakarererwa kare inoita Alano Spanish imbwa inochinjika uye isinganetsi kutarisirwa.
Iyo Spanish Alano imbwa chokwadi chaizvo nezvake, asi zviri nyore kudzidzisa chero bedzi iwe uchishivirira naye uye uchimuremekedza nguva dzose. Uyezve, ndizvo ane rudo kwazvo uye akavimbika, zvakanyanya zvekuti anogadza chisungo chakasimba kwazvo nevadikanwa vake; kunyangwe nevana anowirirana mushe mushe.
Asi hongu, iwe unofanirwa kuziva izvo inochengeterwa vatorwa, iyo isingafanire kunetsekana nemhuri yako nekuti nehukama hwakanaka kubva pahudiki uye zvishoma zvekubata imbwa iwe unozoziva maitiro ekuzvibata navo.
Spanish Alano vana
Imbwa dzerudzi urwu, senge dzevamwe vakawanda, mabhora madiki asina zororo ebvudzi anofarira kumhanya nekutamba nehama dzavo. Kana iwe uchida kuwana chimwe chazvo, iwe unofanirwa kutsvaga kennel yakavimbika iyo inonunura mhuka dzavo nemajekiseni kusvika zvino uye hutano uye, chii chakanyanya kukosha, iine pazera zera remwedzi miviri. Havagone kupatsanurwa naamai pasati pasvika vhiki sere, sezvo vari vadiki kwazvo vanoda kupihwa mukaka wavo.
Kana iwe ukashanyira mumwe munhu ane mhuka dzake mumakeji akasviba, aine shoma kuchengetedza, kana maneja asingakwanise kupindura kusahadzika kwese kunoitika, iwe unofanirwa kutendeuka kuti uwane imwe. Sei? Nekuti munhu anoshanda nemhuka anofanirwa kuyedza kuzvipa zvakanakisa: nzvimbo yakanyarara uye yakachena yekugara kudzamara vawana mhuri yakanaka, uye nerudo rwakawanda.
Iyo Spanish Alano inogona kunge iine brindle-mavara jasi, ndokuti, shava rakasviba nemavara akareruka. Nzeve nemhino zvinowanzo kuve zvitema.
Mutengo weSpanish alano
Iwe unoda kutenga imwe here? Mutengo wembwanana unoenderana nekwatengwa. Kana iri mune yehunyanzvi yekuchera inotora 700 euros, asi kana iri yemunhu akazvimiririra kana kuchitoro chechipfuwo mazana mana euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Hunhu uye kutarisirwa kweSpanish Alano
Spondyloarthrosis: zviratidzo, kurapwa, kutarisirwa
Kutanga kufamba: matipi